သစ်ခက်သံလွင် ကဗျာသုံးသပ်ချက်၊ ကိုနိုင်း ၏ 'မန္တလေးလူငယ်ခေတ်ပေါ်ကဗျာများကိုဖတ်ကြည့်ခြင်း(အဆက်)'
on September 05, 2017 သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ - Articles myat hlaing
ပြတင်းတံခါးအဖွင့် ဇာခန်းဆီးအလွင့်( ၂၇ )
ဒီကနေ့ရေးနေကြတဲ့ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေ(အများစု)ကိုကြည့်ရင် နိမိတ်ပုံပါးပါးနဲ့အကြောင်း အရာတိုက်ရိုက်ရေးတဲ့ပုံစံတွေကို တွေ့နေရပါတယ်။ နောက်တခုက မဂ္ဂဇင်းကဗျာတွေနဲ့ ဂျာနယ်၊ နေ့စဉ်သတင်းစာကဗျာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း နည်း နည်းကွဲပြားမှုကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဂျာနယ်၊ နေ့စဉ်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြနေတဲ့ ခေတ်ပေါ် ကဗျာတွေဟာ ပြည်သူ နဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံနေရတော့ ပြည်သူတွေဖတ်ရတဲ့အခါ ရှင်းခနဲနေမယ့် ကဗျာပုံစံမျိုးတွေကို အဓိကထားပုံရပါတယ်။
ဒါကို ဒီနေ့စောင်ရေများစွာထုတ်ဝေနေတဲ့ နေ့စဉ်သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်တွေဖြစ်တဲ့ ကြေးမုံ၊ စံတော်ချိန် စတဲ့ သတင်းစာတွေနဲ့ သူရိယနေဝန်းဂျာနယ်တွေက အဓိကထားဖော်ပြနေတာ ကို လေ့လာကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေရှင်သန်လာနိုင်အောင် လူငယ် ခေတ်ပေါ်ကဗျာဆရာတွေကို ဦးစားပေးဖော်ပြနေတဲ့အတွက် အင်မတန်ဝမ်းသာစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဒီခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေကိုရေးနေကြတဲ့လူငယ်ကဗျာမျိုးဆက်တွေအတွက် လှေကားတခုပါပဲ။
ဒီလူငယ်မျိုးဆက်တွေအနေနဲ့တော့ မဂ္ဂဇင်းကြီးတွေကိုဆက်တက်နိုင်အောင်လည်း ကြိုးစား ကြဖို့လိုပါတယ်။ ပြောမယ့်သာ ပြောရတာပါ၊ မဂ္ဂဇင်းကြီးတွေကလည်း နာမယ်ကြီးကဗျာ ဆရာကြီးတွေကိုသာ အဓိကထားဖော်ပြနေတော့ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်ကဗျာဆရာတွေ အတွက် ဆက်တက်ရမယ့်လှေကားက အဆင့်တဆင့်ရောက်နိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းကို ပိတ်ထားသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
မဂ္ဂဇင်းကြီးတွေမှာကြည့်ရင် ဒီလလည်း ဒီနာမယ်ကြီး ကဗျာဆရာတွေပဲ၊ နောက်လမှာလည်း ဒီနာမယ်ကြီးကဗျာဆရာကြီးတွေပဲဆိုသလိုဖြစ်နေတဲ့အခါ မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာတွေ ကပဲ ခေတ်ပေါ်ကဗျာကောင်းတွေဖော်ထုတ်နိုင်လောက်အောင် အရည်အချင်းမရှိတာလား၊ မကြိုးစားချင်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ်၊ နီးစပ်ရာစားတော်ခေါ်နေကြတဲ့ ခေတ်ဟောင်းက ပုံစံ ခွက်က အကျင့်စရိုက်တွေဖြစ်နေတာလား၊ အုပ်စုဖွဲ့နေကြတာလား၊ စဉ်းစားစရာပါပဲ။
ရုပ်ရှင်တေးကဗျာ၊ ခေတ်ရနံ့၊ မဟေသီတို့လိုခေတ်ပေါ်ကဗျာကောင်းတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အခုအချိန်ကလည်း နာမယ်ကြီးကြီးက ဗျာညံ့ညံ့အချိန်လို့ပြောရမလားမသိနိုင်တော့ပါဘူး။ ဂန္တဝင်ကဗျာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခေတ်ပေါ်ကဗျာပဲဖြစ်ဖြစ် မဂ္ဂဇင်း တွေမှာ ကဗျာ သမားစစ်စစ်အယ်ဒီတာတွေ ရှိဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒါမှ ကဗျာတွေက ဆက်လက်ရှင်သန် တိုးတက်နိုင်မှာပါ။
အခုရှေ့အပတ်ကရေးခဲ့တဲ့ မန္တလေး(အထက်မြန်မာပြည်) လူငယ်ကဗျာဆရာများရဲ့ ”နောက်ကျောဖုံးတွင်ထည့်ရန်” ကဗျာ စာအုပ်ထဲက ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေကို ဆက်ဖတ်ရှု ခံစားသုံးသပ်ပြချင်ပါတယ်။ ဒီနောက်ကျောဖုံးတွင်ထည့်ရန် ကဗျာစာအုပ်ထဲ မှာပါတဲ့ ကဗျာ အတော်များများက ကျွန်တော်စောစောကပြောသလို နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေ၊ အပတ်စဉ် ထုတ်ဂျာနယ်တွေ မှာ ဖော်ပြခံခဲ့
ပြည်သူနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နေရတော့ ပြည်သူတွေအတွက် ခပ်ရှင်းရှင်းရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေပါ။ အရင်ဆုံးဖတ်မိတဲ့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာကတော့ ”နွယ်ဝေး” ရဲ့ ”ချမ်းနေသောအတ္တများ” ကဗျာပါ။
ရွာဟာ စစ်ကြောင်းလေးအတိုင်း အသံတွေဆွံ့အသွား။
ဘယ်ဘက်က အတ္တတွေ ညာဘက်ကဘဝတွေ
ဒီခေတ်ပေါ်ကဗျာကို နွယ်ဝေးဟာ “မြစ်ဆုံဗေဒါ” ဂျာနယ်မှာရေးခဲ့တာပါ။ ကဗျာက သုံးထားတဲ့ နိမိတ်ပုံတွေလှပါတယ်။ နိမိတ်ပုံကိုယူတဲ့စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေလည်း အင်မတန် ကောင်းပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်နေဆဲပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ အနိဋ္ဌာရုံ မြင်ကွင်းတခုကို ရေးဖွဲ့ပြ သွားပါ တယ်။ အစပိုဒ်အတွေးလေးကအနိဋ္ဌာရုံကို လှပစွာဆွဲခေါ်လိုက်တာ တွေ့ရပါတယ်။
အခုခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေမှာအမြဲတွေ့နေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်အကြောင်း ရေးဖွဲ့ကြတဲ့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာများစွာ ထဲက ခေတ်ပေါ်ကဗျာတပုဒ်ပါ။ ဒီပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ မီးတောက်လောင်မှုဟာ နှစ်ပေါင်းခုနှစ်ဆယ်လောက် ကြာခဲ့ပါပြီ။ စစ်ပွဲကြီးမပြီးဆုံးမချင်း အနိဋ္ဌာရုံမြင်ကွင်းတွေမြင်နေကြရဦးမှာပါ။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေလည်း ရေးနေကြရဦးမှာပါ ပဲ။
နောက်ထပ်ခံစားမိတဲ့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာကတော့ ကြေးမုံသတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ ”ပုညခေတ်(မန္တလေး)ရဲ့”နားလည်မှု လမ်းဆုံ” ကဗျာပါ။
ခေတ်ကိုအပြုသဘောမြင်ပြီးရေးတဲ့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာတပုဒ်ပါ။ ခေတ်ကိုအပြုသဘောနဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကိုထောက်ပြဝေဖန်နေ တဲ့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေလည်းရှိပါတယ်။ အရင်ခေတ်ရော အခုခေတ်မှာပါ ခေတ်ခံစားချက်တွေကို အတွေးအမြင်ပေါင်းစုံက နေရေးဖွဲ့ခဲ့ကြပါတယ်။ ပုံသဏ္ဍာန်တွေလည်း မျိုးစုံနဲ့ရေးဖွဲ့နေကြပါတယ်။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေမှာ လည်း အစဉ်အမြဲတည်ရှိနေတဲ့ ဘဝတွေ၊ အချစ်တွေကိုရေးဖွဲ့တဲ့ ကဗျာများစွာလည်း ရှိပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကခံစားချက်ကဗျာတွေလို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အချစ်သက်သက် ခံစားမှုကဗျာတွေ ရှားသွားပါပြီ။ အချစ်သက်သက်ခံစားမှုကဗျာတွေကို အများက နှစ်သက်လက်ခံကြပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှုကဗျာတွေကို ကဗျာဖတ်သူတွေလက်မခံကြပါဘူး။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေကတော့ သဏ္ဍာန်တူ ထပ်တူမညီမျှခြင်း ကဗျာကို ထက်မြတ်(မတ္တရာ) ရေးတာ တွေ့လိုက်ရသလိုပါပဲ။
ဟိုး အိတ်ထဲက ငါ့ကို
အတိတ်က ငါနဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ကငါ
ဒီလိုပါပဲ။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေက အတိတ်ကနေ ပစ္စုပ္ပန်၊ ပစ္စုပ္ပန်ကနေ အနာဂတ်ကာလတွေ ရွေ့လျားစီးဆင်းလာခဲ့ပေမယ့် ခေတ်ပေါ်ကဗျာပင်မရေစီးထဲမှာပဲရှိပါတယ်။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေအနေနဲ့ ပင်မရေစီးထဲကနေ ခက်ခက်ခဲခဲစီးဆင်းပြီး ရှင်သန်တိုး တက် လာခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ အခုလိုခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေရေးသူများလာမယ်ဆိုရင် ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ကာလတွေ ထက်ပိုပြီး တိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ယူဆရမှာပါ။
ပင်မရေစီးလမ်းကြောင်းမှန်ကို ရှေ့လူတွေက လက်တွဲခေါ်နိုင်ကြဖို့တော့လိုပါတယ်။ အတိတ်ဆိုတဲ့အိတ်ထဲမှာ ပိတ်မိမနေဖို့ပဲ လိုတာပါ။
နောက်ဖတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ခေတ်ပေါ်ကဗျာကတော့ ရတနာပုံသတင်းစာ ထဲမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ “စောမင်းနှစ်”ရဲ့ ”အဖြစ်အပျက်” ကဗျာပါ။
ကဗျာကရိုးရိုးလေးပေမယ့် ကဗျာအတွေးက လှပါတယ်။ ဒီကဗျာကဘယ်လိုတွေးတွေး တွေးလို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်လမ်းကနေ တဖက်လမ်းက ရုန်းထွက်သွားတဲ့ဆိုင်ကယ်သံ နောက် ခေတ်ရှေ့ပြေးချင်တဲ့ လူငယ်လေးတယောက်ယောက် လိုက်သွားတာ ပြန်မလာနိုင်တော့ ဘူးဆိုတာ တွေးမယ်လည်း ရပါတယ်။ တဖက်နိုင်ငံတွေတိုးတက်နေတာကိုအသံကြားပြီးဒီတိုးတက်မှုနောက် ကိုလိုက်ရင်း ပျောက်ကွယ်သွားရတာကို တွေးမိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
မိရိုးဖလာယဉ်ကျေးမှုကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ပြီး ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့နယ်ပယ်က ယဉ်ကျေးမှုနောက်ကို လိုက်ပါသွားရင် အဖြစ်အပျက်ဆိုတဲ့ ကဗျာခေါင်းစဉ်က ပြနေပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ”စောတင့်ညို(အမရပူရ)ရဲ့”ကောင်းကင်အတွက် ကဗျာပန်းချီ” ကဗျာထဲက ကဗျာ တပိုဒ်လို မငြိမ်းချမ်းသေးတာတွေကို ပြနေပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမငြိမ်းချမ်းနိုင်သေးတော့ ကာလာတွေရောထွေးပြီး ပျက်စီးသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ မငြိမ်းချမ်းသေးတဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ စွန့်လွှတ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ အသစ်ပြန်မတည်ဆောက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပျက်မှုတွေများ နေတဲ့ နိုင်ငံကြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကိုလည်း ”စစ်ပြန်”ဆိုတဲ့”PK(ကျောင်းစောင့်ကြီး)”က ရေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါကလည်း မငြိမ်းချမ်းသေးတာကိုပြနေပါတယ်။ အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းဖို့ အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါပြီ။ ဒါကိုအရွေ့တခုအနေနဲ့ တွန်းနိုင်မှရွေ့မယ့် သဘောပါ။ ဒီတိုင်းပြည်မှာနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးက အားရှိသလောက်တွန်းရပါ လိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးခေတ်ပေါ်ကဗျာရဲ့ရှင်သန်တိုးတက်မှုအရွေ့ကို ခေတ်ပေါ်ကဗျာရေးသူတွေအားလုံးကြိုးစားပြီးတွန်းနိုင်မှ ရှေ့ကို ရွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
-The Sun Rays -Vol 1. No 163.2Sep 2017